Fampiakarana sonia finday tsara indrindra: hevitra, vidiny, fifanarahana - Efaha Amin'ny Isam-
fivarotana app dia tsy hisokatra iphone 6
inona no hatao rehefa lasa mainty ny iphone-nao
tsy tapaka ny fifandraisana amin'ny wifi amin'ny iPhone
ny iphone iphone dia tsy azo namboarina intsony. tsy hita ilay fitaovana
tapakila fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny mailaka
Fampiakarana sonia finday tsara indrindra: hevitra, vidiny, fifanarahana
Ratsy ny tolotra findainao ary tsy fantatrao izay hatao. Sahirana ianao rehefa miantso, mandefa SMS, ary mampifandray amin'ny Internet. Vahaolana iray ho an'ny serivisy tsy dia tsara loatra dia ny fanamafisam-peo, izay afaka manampy ny telefaoninao hifandray amin'ireo tilikambo finday eo akaiky eo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona ny telefaona tsy manana serivisy ratsy ary milaza aminao momba ny fampiroboroboana signal finday tsara indrindra !
Inona no atao hoe fanamafisam-peo amin'ny finday?
Tena miasa ve ny fampiroboroboana ny signal?
Fampiroboroboana ny famantarana an-trano vs. Fanamafisana ny famantarana ny fiara
Mpitondra mpitovo tokana mifanentana amin'ny mpametaka famantarana marobe
Iza no tokony hihevitra ny hahazo booster famantarana?
Inona no mety hiteraka serivisy tsy dia tsara?
Ara-dalàna ve ny fampiroboroboana ny signal?
Fampiakarana sonia finday tsara indrindra ho an'ny trano
Boosters famantarana finday tsara indrindra finday
Ny booster signal finday dia fitaovana iray manatsara ny fifandraisan'ny telefaona amin'ny tamba-jotra amin'ny finday. Ny booster signal rehetra dia misy singa telo ilaina: ny booster, ny antena anatiny, ary ny antena ivelany.
Eny, miasa ny mpanentanana famantarana finday ary afaka manampy anao handray tsara kokoa na any an-trano ianao na eny am-pitoriana. Jonathan Bacon, ny VP an'ny Marketing ho an'ny SureCall , hoy ireo mpampiroborobo ny signal amin'ny alàlan'ny “fisamborana signal cellular eo akaiky eo, fanamafisana azy, ary avy eo fandefasana ireo signal ireo ao anatin'ny habakabaka izay mila fambara finday tsara kokoa.”
Avy eo ny booster dia manamafy ny famerenana miverina amin'ny tilikambo sela akaiky azy, mamorona fifandraisana azo antoka.
Sina Khanifar, ny CEO an'ny Waveform , nanampy hoe: 'Antenna napetraka ivelan'ny tranobe na fiara mifampiresaka amin'ny tilikambo, ary misy antena anaty trano hafa mamindra fambara amin'ny findainao.'
Hisy «Booster Signal» miasa ve raha miteny ny findaiko hoe “Tsy misy serivisy”?
Tsia, mazàna dia tsy mandeha ny fampiroboroboana ny signal finday raha toa ka telefaona milaza hoe Tsy misy Serivisy . Nilaza i Bacon fa ireo fitaovana ireo dia tsy afaka manatsara ny fambara misy fotsiny, na inona na inona fahalemeny. Nanampy koa izy hoe: 'Amin'ny tranga sasany, ny booster dia afaka misambotra fambara malemy ary manome tosika ampy anao hiantsoana na handefasana sy handefasana lahatsoratra noho ny fahafahany mandefa signal avy lavitra lavitra amin'ny alàlan'ny telefaoninao irery.'
Miasa ve ny fampiharana fampiroboroboana ny signal?
Ny 'fampiharana fampiroboroboana ny signal' finday dia tsy misy ifandraisany amin'ny fambara findainao. Fa kosa, ireo fampiharana ireo dia miasa indrindra amin'ny alàlan'ny fanafahana Fahatsiarovana fidirana tsy miangatra , mamela ny telefaoninao hifantoka indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra amin'ny mpitatitra anao.
Mandritra ity MEY mahasoa ary ampio indraindray ny telefaoninao hahazo famantarana tsara kokoa amin'ny faritra maloto, tsy mampiroborobo ny fambara findainao izy ireo ara-teknika.
nofy momba ny amboadia manafika dikany
Vokatr'io fahasamihafana io dia noheverin'ny FCC ho mpanentana an-trano fa “mahery loatra ho an'ny fiara”, hoy i Bacon.
Kenny Trinh, mpitantana ny Netbooknews , dia milaza fa ny fampiroboroboana ny signal ao an-trano amin'ny ankapobeny dia manana tombony hatramin'ny 70 desibela (dB), raha toa ka maherin'ny 50 dB ny tombam-bidin'ny fiara manerantany.
Azonao atao ny mampiasa ny booster signal ao an-tranonao amin'ny fomba teôria. Na izany aza, satria manana tombony ambany kokoa noho ny booster trano mahazatra izy ireo, dia mety tsy dia hahomby.
Nanampy i Bacon fa tsy toy ny fanamafisana ny fiara, '… ny fanamafisam-peo ho an'ny trano sy ny fananganana trano dia natao ihany koa mba hampitomboana ny velarana anatiny na dia mafy aza ny famantarana any ivelany.'
maninona ny app-ko no maka mandrakizay misintona
Fanavahana lehibe iray hafa tokony hatao rehefa miantsena ny fampiroboroboana ny signal finday dia ny tsy fitovizan'ny mpampiroborobo ny mpitatitra tokana sy ny mpitatitra maro. Araka ny soso-kevitr'ireo marika, ny fanamafisana ny mpitatitra tokana dia manamafy ny fambara amin'ny tsy misy tariby fotsiny, fa ny boosters multi-carrier kosa dia afaka manamafy ny famantarana ny maro na ireo mpitatitra lehibe rehetra.
Nilaza i Khanifar fa ireo mpanentana famantarana finday mpitovo tokana dia 'mifanaraka tsara amin'ireo mpampiasa manana fambara malemy ivelan'ny tranony' satria manana ambaratonga fanamafisam-peo avo kokoa noho ny fampiroboroboana ny mpitatitra maro. Ny mpanentana mpitatitra tokana dia manana tombony 100 dB!
Ireo manam-pahaizana niresaka taminay dia tsy nanana olana tamin'ny fanatontosana ny lisitry ny fanasan-damba amin'ny tranga hampiasana signal. Bacon dia nanolotra anay fitsapana litma kely ho an'ireo izay mihevitra ny hahazo booster signal:
[Makà booster signal] raha sendra any amin'ny toerana misy signal anao ianao fa sendra antso an-tariby, haingam-pandeha haingana, na olana amin'ny fandefasana lahatsoratra ary misy fiantraikany amin'ny fiainanao izany. Na amin'ny fiarovana na amin'ny famokarana, ny fanamafisam-peo dia hanampy amin'ny fahatokisan-tena ilaina mba hanohizana ny drafitrao, na inona izany na inona.
Nilaza i Bacon fa ny tranga fampiasana booster signal mahazatra dia misy ny RVers sy ny mpandeha hafa izay te hihazona fifandraisana azo itokisana sy ireo matihanina amin'ny asa aman-draharaha izay miankina amin'ny toerana mafana finday hahavitana asa.
Khanifar, izay nilaza fa nahita fiakarana avo lenta ny orinasany nanomboka ny valanaretina coronavirus, dia nilaza fa maro ny olona mividy fampiroboroboana signal ho backup raha sendra misy fahatapahana Internet. Tian'izy ireo ho azo antoka fa hanana fifandraisana Internet matanjaka izy ireo raha toa ka mila mampiasa angon-drakitra finday mandritra ny fotoana maharitra.
Nanampy izy fa ny olona sasany dia tsy manana safidy Internet malalaka. Miankina amin'ny angon-drakitra finday ho loharanom-pifandraisana voalohany amin'ny Internet izy ireo. Ny booster signal dia manampy azy ireo hihazona fifandraisana Internet azo antoka.
Betsaka ny zavatra samihafa mety hiteraka serivisy finday tsy dia tsara. Matetika, ny serivisy tsy dia tsara dia vokatry ny tambajotram-pifandraisana tsy misy tariby misy anao any amin'ny faritra misy anao. Zahao ny anay sarintany fandrakofana raha te hahita hoe iza no mpitatitra manana ny fandrakofana tsara indrindra eo akaikinao. Hamarino tsara fa jereo ny toeram-piasanao, ny toerana fialan-tsasatra tianao, ary ny toerana hafa tsidihinao matetika koa.
Na izany aza, raha misy fandrakofam-pitaterana any amin'ny faritra misy anao dia betsaka ny zavatra mety hiteraka serivisy sela tsy dia tsara. Raha afaka mifandraika amin'ny tranga iray na maromaro voatanisa etsy ambany ianao, dia mety hanampy anao hahazo serivisy tsara kokoa ny fanamafisam-peo amin'ny finday!
Fitohanana amin'ny tamba-jotra
Ny tilikambo sela dia manana fahaizana manokana. Sarotra ho an'ny rehetra ny mahazo serivisy tsara raha olona marobe amin'ny faritra kely no manandrana mifandray amin'ny tilikambon'ny sela iray miaraka. Matetika izany dia mitranga mandritra ny hetsika ara-panatanjahantena, kaonseritra ary fifamoivoizana mandritra ny fotoana be.
Misy tafo vy ve ny tranonao? Miasa amin'ny tranobe misy rindrina matevina ve ianao? Raha izany dia mety izany no mahatonga anao miaina serivisy tsy dia tsara ao an-trano na any amin'ny birao. Ny fambara tsy misy tariby dia manana fotoana sarotra alohan'ny hidirana amin'ny metaly sasany sy fitaovana fananganana toy ny beton.
Ireo izay monina any ambanivohitra dia tsy dia misy firakofana tsara loatra noho ireo izay mipetraka amin'ny tanàn-dehibe. Ireo mpitatitra tsy misy tariby dia tsy nanambola firy tamin'ny fotodrafitrasa tambajotra ambanivohitra toy ny any amin'ny fotodrafitrasa tambajotran-tanàna.
Ny Landscape voajanahary
Tsy dia fahita firy io, fa ny tontolo misy anao eo an-toerana dia mety hiteraka tolotra ratsy. Raha mipetraka eo akaikin'ny tandavan-tendrombohitra na ala ala lava ianao, dia azo atao fa tsy afaka mamakivaky ireo zavatra voajanahary eny an-dalana fotsiny ireo tilikambo sela etsy ankilany.
Ny raharaha findainao
Ny tranga an-tariby dia antony iray tsy dia mahazatra loatra amin'ny tsy fahampian'ny serivisy. Ny ankamaroan'ny tranga ankehitriny dia maivana ary namboarina miaraka amin'ny TPU malefaka. Na izany aza, raha manana tranga matevina izaitsizy ianao, na tranga vita amin'ny vy, dia mety hanakana ny antenan'ny findainao tsy hifandray amin'ny tambajotram-pitateranao izany.
inona no ataon'ny maody fanarenana
Olana amin'ny finday
Raha nandatsaka ny telefaoninao tany anaty farihy ianao vao haingana na nanisy azy io ho eny amin'ny sisin-dalana, dia mety ho tapaka ny antena tompon'andraikitra amin'ny fampifandraisana amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby. Tsy maninona ny hatsaran'ny tambajotram-pitateranao - raha tapaka ny antena na modem dia tsy hifandray izy io!
Eny, ara-dalàna ny fanamafisam-peo ao Etazonia sy amin'ny ankamaroan'ny firenena hafa. Ireo mpanentana famantarana any Etazonia dia tsy maintsy omen'ny FCC fanamarinana, koa tadidio izany rehefa miantsena ho an'ny anao manokana. Ny booster signal rehetra izay natolotray eto ambany dia voamarina amin'ny FCC!
Na izany aza, tsy ara-dalàna na aiza na aiza ny fanamafisam-peo. Any amin'ny firenena sasany dia tsy afaka mividy fampiroboroboana mari-pamantarana fotsiny ianao raha toa ka omena anao mivantana avy amin'ny mpampitohy anao. Nilaza i Trinh fa izany dia satria ny mpitatitra tsy misy tariby dia 'nividy ny zony hamindra amin'ny alalàn'ny [spectrum] ary fitaovana manana alalana ihany no avela hamindra ao aminy.'
Fantatrao izao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba handraisana fanapahan-kevitra tsara rehefa mividy fanamafisam-peo! Etsy ambany, hodinihinay ireo fampiroboroboana ny finday tsara indrindra ho an'ny tranonao na ny fiaranao.
BoosterRange (metatra toradroa) Max Gain (dB) Vidiny
SureCall Fusion4Home 5.000 72 $ 389.98
WeBoost Home MultiRoom 5.000 65 $ 549,99
Cel-Fi Go X 10.000 100 $ 999.99
SureCall Flare 3.0 3.500 72 $ 379.99
Samsung 4G LTE Network Extender 2 7.500 100 $ 249,99
Ny SureCall Fusion4Home dia fanamafisam-peo lehibe ho an'ny trano sy ny birao, satria 5 000 metatra ny refiny. Ity booster ity dia mahazo tombony 72 dB ary mifanaraka amin'ny mpitatitra tsy misy tariby rehetra any Etazonia. Ny Fusion4Home dia afaka mitazona sy manatsara ny signal Voice, 3G, ary 4G LTE noho ny haitao 2XP.
Ho hitanao ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny Fusion4Home ao amin'ny Amazon, izay misy fandefasana maimaim-poana avy amin'ireo mpikambana Prime!
WeBoost Home MultiRoom (tongotra 5,000 Kavina)
ny We Boost Home MultiRoom fanamafisam-peo dia safidy tsara ho an'ireo mipetraka amin'ny trano be na miasa amina birao lehibe. Ity booster ity dia manana elanelam-potoana mahatratra 5.000 metatra toradroa, midika izany fa hahazo efitrano telo hatramin'ny telo ianao. Manana tombony hatramin'ny 65 dB izy, mifanaraka amin'ny mpitatitra tsy misy tariby US rehetra, ary azo apetraka tsy mampiasa fitaovana elektrika.
Azonao atao ny mividy an'ity booster signal weBoost ity amin'ny $ 549.99 miampy fandefasana. Afaka mamonjy amin'ny fandefasana amin'ny alàlan'ny mividy mivantana avy any Amazon !
Mila booster signal finday mahery vaika ho an'ny tranonao? ny Cel-Fi GO X mety ho safidy mety indrindra ho anao.
Ity booster signal ity dia afaka manatsara ny signal hatramin'ny fahazoana 100 dB satria manondraka mpampita tsy misy tariby iray fotsiny isaky ny mandeha. Na dia tsy mety amin'ny tontolon'ny birao aza izany, dia mety tsara ho an'ny fianakaviana amin'ny drafitra telefaona iray ihany.
Afaka mahazo Cel-Fi GO X ianao miaraka amina tontonana 1-2 na dome antennas. Ny antennas tontonana dia manampy anao hahazo serivisy tsara kokoa amin'ny lafiny iray ao an-tranonao, toy ny lakozia na efitrano fandraisam-bahiny. Ny ankamaroan'ny orinasa mpampiroborobo ny signal dia hanome soso-kevitra ny hanandrana antena panel alohan'ny antenaon'ny dome.
Dome antennas dia afaka mamindra signal a amplified 360 degre. Midika izany fa tsy ho lasibatra loatra amin'ny faritra manokana ao an-tranonao ilay signal, fa afaka hahatratra faritra iray midadasika kokoa ianao. Ny antennôma dôma dia miasa tsara ao an-trano misy valindrihana ambany sy planina malalaka. Raha tsy izany, antena tontonana dia safidy tsara kokoa.
Afaka mividy booster signal Cel-Fi GO X ianao miaraka amin'ny antennas dome na dome Amazon ! 999 $ ny booster iray-antena, raha $ 1149 kosa ny booster antena roa.
Nahazo fankasitrahana manokana ny SureCall noho ny fanavaozana ireo fampiroboroboana ireo famantarana Flare. ny Flare 3.0 no maodely farany indrindra amin'ity vokatra nahazo loka ity.
Ity booster signal finday ity dia manana 3.500 metatra toradroa ary ahazoana 72 dB ambony indrindra, ka mahatonga azy ho trano sy kabine ary birao mety tsara. Hampiakatra ny feon'ny sela sy Voice 4G LTE izy io ary hanohana fitaovana maro miaraka.
ny fomba hanafenana ny laharan'ny sela
Ny Flare 3.0 dia afaka manome fandrakofana bebe kokoa noho ny fanamafisam-peo nentim-paharazana hafa noho ny omni-directional sy ny Yagi antennas, izay miaraka amina booster.
Azonao atao ny mividy an'ity finday booster ity Amazon ary Best Buy amin'ny $ 379, fa ny mpanjifa prime dia mety hahazo fihenam-bidy.
Verizon dia iray amin'ireo mpitatitra tsy misy tariby izay tsy nijanona ny varotra fampiroboroboana signal. Verizon dia manana tamba-jotra tsy misy tariby tsara indrindra any Etazonia, fa na izy ireo aza tsy manana fandrakofana 100%. ny Samsung 4G LTE Network Extender 2 safidy tsara ho an'ny mpanjifa Verizon, satria afaka mahazo fanampiana mivantana avy amin'ny mpitatitra tsy misy tariby ianao.
4G LTE Network Extender 2 an'ny Samsung dia manome fandrakofana hatramin'ny 7.500 metatra toradroa, ka mahatonga azy io ho an'ny trano lehibe na tranobe birao. Izy io dia afaka manohana fitaovana efatra ambin'ny folo miaraka amin'ny fotoana iray. Na dia novokarin'i Samsung aza ity booster ity, dia manohana ny fitaovana 4G rehetra izy io, ao anatin'izany ny iPhone sy ny maodely Android hafa.
Na izany aza, misy fetra voafetra ity booster ity. Mitaky fifandraisana Internet matanjaka sy miorina amin'ny Internet miaraka amin'ny hafainganana farany ambany 10 Mbps midina ary 5 Mbps miakatra. Ity fitaovana ity dia tsy afaka manatsara ny famantarana 4G LTE fotsiny.
Ianao dia afaka mividy ny Samsung 4G LTE Network Extender mivantana avy any Verizon amin'ny $ 249.99. Ny kinova am-boalohany an'ity vokatra ity dia azo jerena ao amin'ny Amazon amin'ny $ 199,99, saingy tsy afaka manohana fitaovana fito fotsiny izy miaraka.
BoosterCarriersMax Gain (dB) Vidiny
SureCall Fusion2Go Max Etazonia rehetra dimam-polo $ 499,99
WeBoost Drive Sleek Etazonia rehetra 2. 3 $ 199,99
Phonetone Dual Band 700MHz AT&T, T-Mobile, Verizon Efatra Dimy $ 159.99
WeBoost Drive 4G-X OTR Etazonia rehetra dimam-polo $ 499,99
SureCall's Fusion2Go Max dia mpampiroborobo famantarana ny fiara nahazo loka. Izy io dia afaka manatsara ny signal Voice, 3G, ary 4G LTE amin'ny tambajotra finday rehetra any Etazonia. Ny Fusion2Go Max dia mahazo tombony hatramin'ny 50 dB, izay somary matanjaka noho ny fanamafisam-peo ho an'ny finday mahazatra ho an'ny fiara.
Ity booster ity dia afaka manohana fitaovana marobe miaraka, ao anatin'izany ny smartphone farany misy fifandraisana 5G.
Azonao atao ny mividy a SureCall Fusion2Go amin'ny Amazon amin'ny $ 499,99 .
ny WeBoost Drive Sleek dia famporisihana lehibe hafa ho an'ny olona eny am-pandehanana. Ity booster signal an'ny fiara ity dia natao miaraka amin'ny cradle ho an'ny telefaona finday 5.1-7.5 santimetatra na fitaovana fidirana manokana. Manana tombony hatramin'ny 23 dB izy ary mifanaraka amin'ny tambajotra finday rehetra any Etazonia.
Aza raisina fotsiny ny teninay. Jordan Schwartz, ny filohan'ny Azo zahana , manana ity booster signal ity ary tena mamporisika azy. Nilaza i Schwartz fa ity fanamafisam-peo ity dia manampy azy hitantana ny orinasany eny an-dalana raha manao dia miaraka amin'ny fianakaviany ao amin'ny van camper-ny izy.
Nanampy izy fa ny booster signal WeBoost Drive Sleek dia 'afaka mandray bara iray ary hamadika azy io ho telo, ary raharaha lehibe izany rehefa eo amin'ny valan-dresaka video Zoom miaraka amn'ny mpanjifa iray ianao raha mitoby amin'ny butte eo afovoan'ny efitra.'
Ity booster ity dia mitentina 199,99 $. Ny mpikambana praiminisitra dia afaka manangona vola amin'ny vidin'ny fandefasana ho an'ny weBoost Drive Sleek by mividy mivantana amin'ny Amazon .
mainty ny efijery iphone-ko nefa mandeha foana
Phonetone's Fanamafisam-peo fiara Dual Band 700MHz dia safidy matanjaka ho an'ny olona amin'ny tetibola tery kokoa. Ity booster ity dia tsy dia manerantany amin'ny famporisihana hafa natolotray. Izy io dia mifanaraka amin'ny Band 12 (AT&T), Band 13 (Verizon), ary ny Band 17 (T-Mobile). Raha mampiasa ny iray amin'ireo tarika 4G LTE ireo ny findainao dia mety aminao ity booster ity!
Ity booster Phonetone ity dia manana tombony 45 dB ambony indrindra ary afaka manohana fitaovana maro miaraka. Izy io dia miaraka amin'ny antoka famokarana 5 taona ary antoka famerenam-bola ao anatin'ny telopolo andro.
Azonao atao ny mividy ny Phonetone Dual Band 700Mhz amin'ny Amazon ho an'ny $ 159,99. Ny phonetone dia manana fanamafisam-peo fampiasa amin'ny finday betsaka kokoa ihany koa, saingy lafo kely kokoa ny vidiny.
WeBoost Drive 4G-X OTR mpivarotra kitapo
Mila mpamantatra sela azo antoka foana ny mpandefa kamiao mba hahafahany mijanona amin'ny làlana mazava sy manome fanavaozana ny fotoana fanaterany. Na izany aza, tsy azo ihodivirana ny serivisy finday rehefa mandeha fiara manerana ny firenena ianao. Soa ihany, weBoost dia manana booster signal natao ho an'ny kamio.
ny WeBoost Drive 4G-X OTR mpivarotra kitapo mifanaraka amin'ny mpitatitra rehetra any Etazonia ary afaka mampitombo ny herin'ny signal hatramin'ny 32x. Ity booster ity dia afaka manohana fitaovana marobe miaraka ary miaraka amin'izay ilainao rehetra amin'ny fametrahana tsimatimanota.
Ianao dia afaka mividy kitapo kitapo weBoost Drive 4G-X OTR amin'ny Amazon ho an'ny $ 499.99 eo aloha na amin'ny fizarana enina eo amin'ny $ 83 eo ho eo.
Fampiroboroboana ny fambara finday, nohazavaina
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hahita booster signal finday tsara avy any an-tranonao, birao, na fiaranao. Ny tanjaky ny fambara tsy dia tsara dia mety hanelingelina anao, saingy izao manana vahaolana amin'ny olana ianao.
Manana fanontaniana hafa momba ny fampiroboroboana finday? Avelao izy ireo ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany!
SIM tsy mandeha amin'ny iPhone? Ity no antony sy ny vahaolana farany!
Mikipy ny efijery iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Mac iza no tokony hovidiko? Mampitaha an'ireo Mac vaovao.
Snapchat Tsy Miasa Amin'ny WiFi? Ity ny The Real Fix For iPhones & iPads!
Ahoana no fomba hialana amin'ny feta amin'ny karipetra
Ahoana no fomba hamoronana fifandraisana vaovao avy amin'ny hafatra amin'ny iPhones ao amin'ny iOS 12? The Fix!
Tapaka ny efijery iPad-ko! Ity ny vahaolana farany.
Vaky ny efijery iPhone X? Ity ny fomba fanamboarana azy anio!
Ahoana ny famonoana ny famakiana vola amin'ny iPhone: ny tena fanamboarana!
Tsy miasa amin'ny iPhone ny ID amin'ny tarehy? Ity ny The Fix!
Kaody coupon Amazon: Tehirizo amin'ny fanamboarana iPhone na Android amin'ny alàlan'ity kaody fampiroboroboana tsy manam-paharoa ity!
Tsy hifandray amin'ny Internet ny iPhone-ko! Ity ny vahaolana farany.
Fa maninona no mavo ny masoko iPhone-ko? Ity ny The Fix!
Tsy mandeha ny mpandahateny iPad? Ity ny The Real Fix!
Tsy mandeha ny efijery mikasika ny iPhone-ko! Ity ny The Fix.
Inona ny maody fiaramanidina amin'ny iPhone? Ity ny Marina!
Ahoana ny fomba hanampiana sy hanesorana ireo Widget amin'ny iPhone: The Simple Guide!
NY DIKAN'NY BAIBOLY HALO MANODIDINA NY VOLANA
Hevitry ny faminaniana ao amin'ny Baiboly